अर्जेन्टिना : रक्सी पिएर गाडी चलाए यी व्यक्तिले, अनि भयो यस्तो (भिडियो)
काठमाडाैं | मंसिर १०, २०७८
अर्जेन्टिनाको मार दे प्लाता शहरमा रक्सी पिएर गाडी चलाएका एक व्यक्तिले आफूलाई मृत्युको डर नलाग्ने घमण्ड गरेका छन् ।
इग्नासियो आरोस्तेगुईलाई मदिराले मत्त भएर गाडी चलाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । घटना गत शुक्रवार भएको हो ।
आरोस्तेगुईले गाडीलाई रुखमा ठोकेका थिए । उनी र गाडीमा रहेका अर्का व्यक्तिलाई चोटपटक लागेन ।
ब्रेथलाइजर टेस्ट गर्दा आरोस्तेगुईको शरीरमा अल्कोहलको मात्रा १.०३ पाइयो । त्यो निर्धारित सीमा ०.५ भन्दा निकै बढी हो । उनको लाइसेन्स रद्द गरिएको छ ।
आरोस्तेगुईले फोक्सवागन फक्स गाडी चलाएका थिए ।
किन झुण्ड्याइन्छ पसलमा कागती र खुर्सानीको माला
दक्षिण कोरियामा कुकुरको मासुमा प्रतिबन्ध लगाउन विचार गरिँदै
यी महिलाले आफैंसँग गरिन् विवाह !
भारतको गुजरातमा बस्ने क्षमा बिन्दुले आफैंसँग विवाह गरेकी छन् । बुधवार उनले आफैंलाई सिन्दूर लगाएर विवाह गरेकी हुन् । यस्तो विवाहलाई सोलोगेमी भनिन्छ । हिन्दू धर्ममा यस्तो किसिमको विवा...
विवाहमा बेहुलीले खेल जितेपछि बेहुलाले हिर्काए थप्पड ! भिडियो भाइरल
विवाहको दिनलाई खुशीयालीको दिन मानिन्छ तर एक विवाह समारोहमा बेहुलाले बेहुलीलाई थप्पड हिर्काएको भिडियो भाइरल भइरहेको छ । उज्बेकिस्तानमा भइरहेको विवाहमा रमाइलोका लागि बेहुला र बेहुलीलाई एउटा खेल खेलाइएक...
बेलायत : पाइलट शौचालयभित्रै हराएपछि यसरी अवतरण गराइयो विमान
बेलायतको ईजी जेटको एक यात्रुवाहक विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराउँदा यात्रुहरू आत्तिएका छन् । पाइलट बिरामी भएर शौचालय गएपछि उतै हराए । त्यसपछि विमानलाई एडिनबरा विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराइयो । ...
कस्तो भयंकर दुर्घटनाबाट बाँचे यी व्यक्ति ? (भिडियो)
ब्राजिलको माराकानाउको एक सडक छेउमा उभिएका व्यक्ति ठूलो दुर्घटनाबाट बाँचेका छन् । रुखमा ठोकिएपछि अनियन्त्रित भएको एक ट्रकको अघिल्लो भाग आकाशमा उठेको थियो । त्यसले सडकछेउमा उभिएका व्यक्तिलाई झण्डै किचेको...
चमत्कार : नदीमा खसेको १० महिनापछि भेटियो मोबाइल, चार्ज गरेपछि चल्यो
नदीमा खसेको मोबाइल १० महिनापछि पाइएका र ठीकठाक चालू होला भनेर कसैले कल्पना गरेको हुँदैन तर ब्रिटेनमा यस्तै घटना भएको छ । ब्रिटेनका ओवेन डेबिसको फोन वाय नदीमा खसेको थियो । तत्कालै नपाइएपछि उनी मोबाइल ...
यी महिलाले ‘विर्य दाता’ खोज्दा पति नै भेटेपछि ...
प्राकृतिक रूपबाट गर्भवति हुन असमर्थ महिला विर्य दाता खोजिरहेकी थिइन् तर उनलाई पति नै भेटिए । न्युजिल्यान्डको घटनाअनुसार ४६ वर्षीया सी राइनीको विवाह भए पनि बच्चा जन्मिएनन् । उनकै समस्याका कारण बच्चा नजन्मिएपछि ...
बजेटले कसलाई किन पिरोल्यो ?
बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्‍यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन । बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको ...
ठूलो दल भएकोमा अहंकार गर्दैनौं, गठबन्धनको औचित्य बाँकी छ– विश्वप्रकाश शर्मा [अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं स्कुल अफ ल बन्यो गुणस्तर तथा सुनिश्चितता प्रत्यायनकृत हुने पहिलो कानुन कलेज
माधव नेपालले सन्यास लिए हुन्छः योगेश भट्टराई
दुई दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने
पोखरेल अष्ट्रेलिया र रिजाल इजरालयको राजदूत नियुक्त
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, को-को भए मन्त्री ? [सूचीसहित]
गभर्नर अधिकारीको गैरजिम्मेवार भूमिका: अर्थतन्त्र सम्हाल्न लाग्ने कि जनता आतंकित बनाउने ?
लोकगायिका सुनार मृत्यु प्रकरणमा खुलेका तथ्य– दोहोरीसाँझको भेटदेखि लिभिङ टुगेदरसम्म
जो वातावरणमैत्री सेनेटरी प्याड बाँड्दै तथा बनाउन सिकाउँदै हिँड्छन् [भिडियो]
सौगात र सलोन अभिनित ‘घनचक्कर’को व्यापार निकै कमजोर, धेरै हलबाट दुई दिनमै उत्रियो
दोहोरी गायिका दिलमाया सुनार आफ्नै कोठामा मृत फेला
नेकपा एस विवाद : प्रेम आलेसहित ६ सांसदले फिर्ता गरे हस्ताक्षर, झाँक्री लगायत क–कसले गरेनन् फिर्ता ?
मृत्युअघि गायिकाको भावुक स्टाटस : आमा अहिले धेरै गाह्रो भयो